သနပ်ခါးမေ: November 2013
အလှအပ clinic သို့တစ်ခေါက်
By **~ မြတ်ကြည်~** 3:34 AM မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
အရင်အပတ်လောက်က သူငယ်ချင်းနဲ့ ကြေးအိုးစားနေတုန်း ဂွတ်တလိပ်ဘက်မှာ အလှအပ ဆေးခန်း တစ်ခုကို သတိထားမိတဲ့ အကြောင်းစကားစပ်မိသွားတော့ သိပ်မကြာပါဘူး။ သွားစပ်စုကြတာ။ :D
အထူးအဆန်းလေးတွေ ရှိလို့ မေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဘာမှတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ထူးထူးခြားခြားတွေက အသားဖြုအောင်ဆေးထိုးလို့ရပါသတဲ့။ အကြောဆေး (IV) Vitamin C နဲ့ Glutathione တွဲထိုးတာလို့ ပြောတာပဲ။ နောက်တစ်ခုက mesotherapy fat injection ပါ။ ထုံးစံတိုင်းမဟုတ်ပဲ အဆီကျချင်တဲ့နေရာကို injection ထိုးပြီး အဆီချတာ။ တစ်ခါထိုး ၂ ampoule ။ Tone တက်အောင် စက်နဲ့တွဲလုပ်ရင် ပိုကောင်းတယ်ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် tone အတွက်က ကိုယ့်ဘာသာ belly ရိုက်လည်းရတာပဲလေနော်။
နောက်တစ်ခုကတော့ laser hair removal တွေပေါ့။ နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးတွေတော့ ကွာသွားတာပေါ့နော်။ သူက လုပ်မယ်ဆို ၆ ကြိမ်ဆိုပြန်မထွက်တော့ပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် လူမျိုး၊ အမွှေးအရမ်းထူတဲ့သူတွေကိုတော့ အာမမခံပါဘူးတဲ့။ ခွဲခြားတာလား ပြောပါ :P
တခြား esthethics ဆိုင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း နှာခေါင်း filler ထိုးတာတို့၊ botox ထိုးတာတို့ မျက်နှာ peeling တို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ အများကြီးထဲကမှ စိတ်ဝင်စားတာလေးတွေကို ဈေးနှုန်းမေးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းဆီကို5TIMES - 1 TIME FREE , 10 TIMES -3TIMES FREE.
တစ်ခါလုပ် ဈေးတွေကတော့ --
Rejuvenation therapy - 145,000
Meso fat injection - 90,000
Hair removal (armpit) - 80.000
၁၀ ကြိမ် sessions ယူမယ်ဆို 30% DISCOUNT ချပေးမယ်ပြောတာပဲ..
ဆိုင်နေရာကတော့ ဦးချစ်မောင်လမ်း Aroma ဓာတ်ပုံတိုက်တို့၊ AGD ဘဏ်တို့နားမှာပါ။
ဆိုင်အပြင်အဆင်ကတော့ ယိုးဒယားဘက်ကနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ မလုပ်ဖူးတော့ကောင်းမကောင်းတော့ ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။
လိုက်ရှာလိုက်တာ facebook page -- https://www.facebook.com/MyPrincessClinic ဒါကကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်ရေးတာပါ။ ကြော်ငြာခရတယ်ထင်မှာစိုးလို့။ :D
မြတ်ကြည် ကိုရီးယားမှာတုန်းက သွားခဲ့တဲ့ အလှအပ ဆေးခန်း အကြောင်းဖတ်မယ်ဆိုရင် ဒီအောက်က လင့်လေးကို နှိတ်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 4:22 AM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
တချို့မိန်းကလေးတွေ စိတ်ညစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှာ ချိုင်းသားမဲရတဲ့ အကြောင်းလည်း ပါမယ် ထင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးဖြစ်ရတာ မလွယ်ဘူးနော်။ ပီစီပါစီ ကိစ္စတွေကလည်း အများသား။
များသောအားဖြင့် ခန္ဒာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံအရ ချိုင်းသားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပွတ်တိုက်ခြင်းကြောင့် မဲလာရတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုအဖြစ်များတာက တော့ အမွေး ရိတ်တာ၊ အမွေးနှုတ်တာကြောင့်ပါ။ အမွေးကို နှုတ်လိုက်၊ ရိတ်လိုက်တဲ့ အခါတိုင်း မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ အရေပြားပွန်းပဲ့မှုလေးတွေ (microabrasions) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီပွန်းပဲ့မှုလေးတွေ အနာကျက်တဲ့အခါ အရေပြားမှာ ထင်ကျန်ခဲ့ပြီး အရောင်ရင့်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုင်းဆိုမသိသာပေမယ့် ရိတ်ပြီး၊ နှုတ်ပြီးသားနေရာလေးတွေကို အရက်ပြန်နဲ့ ပွတ်ကြည့်လိုက်ရင် စပ်ဖြင်းဖြင်း ဖြစ်ရတာဟာ အဲဒီ microabrasions လေးတွေကြောင့်ပါ။ ရိတ်တာ၊ နှုတ်တာက အရေပြားမှာရှိတဲ့ မွေးညင်းပေါက်ကို ပိုကျယ်စေလို့ ကြာရင် ကြက်အရေခွံလို အသားအရေမျိုးဖြစ်လာရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အခါမှာလည်း ဟော်မုန်းအပြောင်းအလည်းကြောင့် မဲလာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးမီးဖွားပြီးတဲ့အခါ ပုံမှန်အသားအရေပြန်ရတာမို့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
တချို့ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး (deodorant) တွေဟာလည်း အသားနဲ့မတည့်တဲ့အခါ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ပြီး မဲစေပါတယ်။ အဝလွန်တဲ့ လူတွေမှာ ချိုင်းသား၊ ကုတ် နဲ့ တကောက်ခွက်လို အကွေးအဆန့်နေရာမျိုးမှာ သာမန်ထက် မဲနေတတ်ပါတယ်။
အထိရောက်ဆုံးနည်းကတော့ အရေပြားဆရာဝန်ဆီမှာ peeling solution ကိုသုံးပြီး အရေပြားအပေါ်အလွှာခွါ ပစ်လိုက်တာပါ။ အိမ်ရောက်တဲ့အခါ ပေးလိုက်တဲ့ ချွတ်ဆေး bleaching cream ကို ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း လိမ်းပေးရပါတယ်။
ဈေးမကြီးပဲ အိမ်မှာပဲ ချိုင်းသားဖွေးအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သံပုရာသီးရှိပါတယ်။ သံပုရာသီးမှာ vitamin C ပမာဏများများပါတာမို့ ချိုင်းသားအရောင်ကိုလည်းအနည်းငယ်ဖြူလာစေတဲ့အပြင် ချိုင်းချွေးထွက်တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေချိုးပြီးတဲ့ အခါ သံပုရာခြမ်းနဲ့ ပွတ်ပြီး ကျောက်ချဉ်မှုန့်ကိုလိမ်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းက ရေမချိုးခင်၊ သံပုရာရည် တစ်ဇွန်း၊ပျားရည်တစ်ဇွန်း ကိုရော၊ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီး ပြန်ဆေးချပေးနိုင်ပါတယ်။
အရှေ့မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆို အမွေး ရိတ်တာ၊ နှုတ်တာကို "တာ့တာ ... ဘိုင့်ဘိုင်" ပြပြီး အမွေးထူလဖြစ်နဲ့နေရမယ်ပေါ့? @_@ ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အရေပြားဆရာဝန်တွေက ရိတ်တာ၊ နှုတ်တာမလုပ်ခင် အသားကို moisturizer လိမ်းပေး ပေးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးသုံးတဲ့ အခါမှာလည်း Vitamin D ၊linoleic acid ၊ glycerine တို့ပါတဲ့ အမျိုးအစားတွေကို ရွေးသုံးစေချင်ပါတယ်။ အရေပြားမှာ အစိုဓာတ်လေးရှိနေရင် irritation ကို အလိုလို ကာကွယ်ပေးသွားမှာပါ။
ဒီလိုဆို အင်္ကျီလက်ပြတ်ဝတ်ဝတ်၊ ရင်လျှားပဲ ဝတ်ဝတ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဝတ်နိုင်သွားပြီပေါ့နော်။ရှိုးသွားရင် လက်တွေလေထဲမြှောက်လို့ရပါပြီ။ :D
အချက်အလက်များကို Beyond Janes Ways to Whiten your armpit နဲ့ The secret to whiter armpit အား မှီငြမ်းရေးသားပါတယ်ရှင်။